About - Aricha.com
Alietc B2B pamusika inobudirira kuunza vatengi, vatengesi uye vagadziri vanobva kumativi ese epasi, pamwechete mupuratifomu imwe inesimba.
Alietc rakasiyana nemamwe anozivikanwa mumisika yedhijitari senge Alibaba, Amazon, Taobao, zvikuru nekuti yakaratidza kutadza kwemapuratifomu ese uye kudzivirira kuita izvo zvakafanana zvikanganiso.
Mukana mukuru weAltc ndeyekuti haisi kubhadharisa mubhadharo pane zvekutengeserana, saka vatengi, vatengesi uye vagadziri vanogona kutarisisa pane chaiyo pasi petsetse vasina kunetseka pamusoro pekubhadharwa kwecommission.
Panzvimbo pekubhadharisa komisheni pakupera kwekutengeserana, Alietc inobhadharisa yakadoma mari kune chero zvinyorwa kana kunyoresa kuti vape zvipo pane zvigadzirwa zviri kutengeswa.
Pane zvikonzero zviviri zvemari iyi. Chekutanga, inoona kuti avo vanonyora kana kupa chinogadzirwa zvigadzirwa ndeyechokwadi nezvekuita bhizinesi. Chechipiri, tinoda kuchengetedza mutengo kune vashandisi vepuratifomu zvishoma. Semuenzaniso, enzanisa mabheji edu emitengo kune avo veAmazon avo, paavhareji, vanobhadharisa anenge 13% yemutengo wekutengesa. Hatidi madhiri ave chikanganiso kana chinotadzisa kana zvasvika pakuita zvibvumirano, tinoda kuti vange vachikurudzira!
Alietc haingopi ipuratifomu uye inokusiya iwe, mushandisi, kuti uite iyo yese basa rakaoma. Alietc inoshanda nesimba kuunza vanhu vakaita sewe pachikuva, kuburikidza nekushandisa zvakawandisa kweSEO kune zvese zvakanyorwa zvinyorwa. Alietc ipuratifomu inoshingairira uye yakangoita nekuti inokwezva vashandisi vakanyatsozvipira kuita bhizinesi rakanaka nekutanga hukama hunobatsira hwerefu.
Isu takataurawo kuti iyi 'nzvimbo yekudyidzana' pamusika. Izvi zvinoreva kuti tiri kuvaka nharaunda yemabhizinesi uko kutaurirana kwakanaka kiyi yebudiriro. Iko kutaurirana hakungosanganisire kuita zvibvumirano zvakakura, asiwo kusiya mhinduro kune vese kuti vaone. Iyo yekukurudzira kune vagadziri uye vatengesi ndeyekuvaka mukurumbira mukurumbira uye yakavimbika, nepo kune vatengi chinangwa chinofanirwa kunge chiri chekugumisa kuita kwehunyanzvi nekukurumidza, nekushomeka kwekukanganisa.
Imwe B2B DHIPITI Musika, 105 Mitauro Yakasiyana
Iko kusanduka kwekugara kwetekinoroji uye kunaka kwayo kwakasiyana kwakaita kuti ALIETC ishandise kuburikidza nemawebhusaiti anetivhariiti ane mitauro zana, kusanganisira chiChinese, chiGerman, chiArabic uye chiFrench.
Pfungwa irimushure meiyi nzira dzakasiyana-siyana dzemitauro yemarudzi akawanda ndeyokuita kutenga nekutengesa kubhuroka kuri nyore kwazvo uye kwakanakira munhu wese, chero rudzi rwako.
Kana mutsigiri akatumira chigadzirwa, rondedzero yacho ichangoshandurwa mumitauro 105, pamawebhusaiti 105.
Ichi chiitiko, chekushandisa pakarepo, chicha kukonzera kukwezva vatengi vakawanda kubva kunyika dzakasiyana siyana pasi rose, nekudaro nzira yekubudirira kubva pamusika unobudirira musika unotarisa pane zvakakosha kusvika pakusvika kumarudzi akawanda mushandisi mushandisi.
Unogona kuwana zvakazara zvakanakira Alietc pano:
Kubva pane zvipfeko kusvika kune ceramics, fenicha kuenda kumabhokisi emagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi kune zvese zvimwe, chero zvauri kugadzira, kiyi yebudiriro yebhizimusi rako kuwana mukana wevatengi vechokwadi, vanofarira uye vanokwanisa kutenga zvigadzirwa zvako.
Kunyangwe iwe uchiita mukati mezvigadzirwa zvakagadzirwa kana zvigadzirwa zvakasvibirira, kujoina iyo Alietc yedhijitari musika inogona kungova yakanakira bhizinesi. Kunyangwe iwe unotengesa mune zvevatengi zvinhu zvakadai sematoyi, zvipfeko kana kitchenware, kana kuita muzvigadzirwa senge bauxite uye potash, kuburikidza nemachira uye mapurasitiki.
Kana iwe uri kutarisa kuti utenge zvigadzirwa, saka unenge wauya zvirokwazvo kunzvimbo chaiyo. Alietc ndeyechokwadi “Aladdin's Cave” yechokwadi nezvese zvigadzirwa zvatingafungidzira kana zvigadzirwa zvaungafungidzira, uye zvakawanda zvaungangodaro usina kumboziva kuti zviripo.